Na Mee 18, 2019, ụbọchị 17 (2019) China Animal Husbandry Expo na 2019 China International Animal Husbandry Expo mepere na Wuhan International Expo Center. Site na ebumnuche na ebumnuche nke ihe ọhụụ na-eduga mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, Husmụ Anụmanụ Anụmanụ nke anụmanụ ga-egosipụta ma kwalite teknụzụ na ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anụ ụlọ iji kwalite ikike na ọkwa nke ụlọ ọrụ ahụ ma kwalite nkwalite ụlọ ọrụ ahụ. Ihe ngosi a bu ubochi ato ka otutu ndi ulo oru nke 1000 di site na uwa dum na ndi otu na-achikota umu anumanu.
Dika ulo oru nchedo umu anumanu di elu, ndi otu di iche-iche abiawo mgbe nile ibu “nchedo na izochi ha. N'okpuru ihe omumu ohuru nke mgbanwe na nkwalite ulo oru anumanu, Depond na-eweta ihe ndi ozo di iche-iche n’usoro nke udiri onodu oganihu n’abia nke aputaputara n’ulo Anụmanụ nke Anụmanụ.
“Ijikọ, ezi ọrụ, ịdị elu na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ” bụ achụmnta ego na - achụkarị ndị otu mpaghara. Ngwaahịa ndị egosipụtara na ihe ngosi a abụghị naanị ngwaahịa ndị na-ere ọkụ a nwalere n'ahịa, kamakwa usoro ngwaahịa ọhụrụ nwere ọdịnaya dị elu ma merie ụdị mba atọ nke ọgwụ ọgwụgwọ anụmanụ. N'oge ihe ngosi ahụ, ndị mmekọ ọhụrụ na ndị ochie bịara n'ụlọ ihe ngosi ahụ gosipụtara mmasị dị ukwuu na ngwaahịa nke Depond, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahịa ọhụrụ ahụ gosipụtara njikere ha na-emekọrịta ihe, na a ga-enwe mgbanwe dị omimi mgbe nzukọ ahụ gasịrị.
Ihe ngosi a abụghị naanị windo dị mma maka otu a iji gosipụta ike ya, ịzụlite ndị ahịa ma kwalite ngwaahịa, mana ọ dịkwa oke mkpa maka otu a ka ọ baa n’ime n’ahịa ma ghọta ihe ụlọ ọrụ na usoro mba ụwa. Ndị nkuzi ọrụ nke otu na ndị nnọchi anya ndị ahịa na-agbanwerịta echiche nke nchedo ike, ihe isi ike nzụkọ, teknụzụ ụwa kacha elu, teknụzụ na ihe ọmụma ndị ọzọ, nke na-enye echiche maka nyocha na ntuziaka mmepe na mmelite teknụzụ nke ngwaahịa Depond. N'ọdịnihu, Depond ga-aga n'ihu na-achọsi ike ahịa, na-eme echiche nke “nduru maka ndị ọrụ ugbo”, ma na-enye ngwaahịa ndị ka mma, dị irè ma dị ọnụ ahịa maka ụlọ ọrụ ebe a na-azụ ahịa.